Unogona here kunyora chinyorwa chinyorwa? Tevedza nzira iyi | Zvazvino Zvinyorwa
Unogona here kunyora chinyorwa chakanaka?
Carmen Guillen | | Literature, dzakawanda
El chinyorwa chinyorwa ndechimwe chezviitwa zvinowanzoitika mune zve Mutauro uye zvinyorwa panguva yeBaccalaureate danho. Asi chii chaizvo chiri kuita chinyorwa chinyorwa? Muchinyorwa chino tinopindura iwo mubvunzo, akawanda vamwe uye isu tinokuudza maitiro ekuita yakanaka chinyorwa chinyorwa nekutevera mashoma mashoma matanho.
Iwe haurambe chero zvinyorwa zvinyorwa kana iwe ukatevera aya akareruka matipi.
Chinyorwa chinyorwa: Chii icho, zvinangwa uye nemaitirwo azvo
Chinyorwa chinyorwa chirevo chingashandiswa tsvaga mumabasa ekunyora kupinda mutsika yekunzwisisa zvarinoreva zvese. Zvinangwa zvaro zvikuru ndezvekutsanangura meseji zvakajeka uye nenzira kwayo, pamwe nekuongorora kuti sei kana nerudzii rurimi zvinoreva kuti chinyorwa chakavakwa.
Maitiro ekuita yakanaka chinyorwa chinyorwa
Kana iwe uchida kuti zvinyorwa zvako zvive zvakanaka uye uwane giredhi rakanaka kwazvo mune rinotevera sarudzo yekusarudza, iwe unofanirwa kutevedzera iyi nzira.
1 Step: Gadzira a kunyatsoverenga zvinyorwa zvinyorwa yatinayo pamberi pedu. Kuverenga uku chikamu pamberi pechikumbiro, ndiko kuti, usati watanga chiitiko ichocho zvakakosha kuti uverenge zvinyorwa zvakanyatsonaka uye unzwisise zvakajeka zvinotaurwa mariri pamwe nezvinoreva mazwi aro ese uye zvirevo (tinokurudzira kuva neduramazwi padhuze nekukwanisika kutsvaga kwemazwi asingazivikanwe).
Nhanho 2: Tsvaga chidimbu kana basa, ndiko kuti, kuimisa muchimiro uye nenguva, kuziva kuti ndiani munyori akainyora (izvo zvichatipa chiratidzo chakajeka chehunhu hwayo) uye pakupedzisira, kana chiri chidimbu chipfupi, kuziva basa ripi ndezve.
3 Step: Tinofanira kudoma iyo Genre yezvinyorwa zvinyorwa pamwe neiyo chimiro chekutaura kwekunyora. Ndokunge, kana iwo mavara ari ere lyric, yemitambo, kune nhoroondo, etc. Semuenzaniso, kana iwo rugwaro rwakanyorwa mundima, ichave nguva yekuita metric tsananguro yacho, nechiyero chendima, nhetembo yavo, zvitambi, zita renhetembo, nezvimwe. Kana, pane kudaro, chinyorwa chiri chinyorwa, isu tinofanirwa kuita ongororo yezvinhu zvakasiyana, senge hunhu hwemunyori, chiito chakaitwa, mavara anoonekwa, hwaro hwerondedzero, nezvimwe.
4 Step: Tichaongorora zvirimo. Muchikamu chino tichaongorora zvirimo zvakadzama sezvinobvira. Kune izvi, isu tinofanirwa kuteerera uye nekunyatsoongorora zvinhu zvakaita seyakaumbwa yezviri mukati, dingindira, pfungwa dzepakati chechinyorwa, pfungwa dzechipiri, nezvimwe
5 Step: Tichaongorora fomu. Muchikamu chino, isu ticha tsanangura kuti zvirimo zvinoratidzwa sei muchimiro. Semuenzaniso: kana munyori akada kuratidza kana kuburitsa kushamisika, kutya, kushamisika, mufaro, nezvimwe.
6 Step: Mhedziso. Icho chikamu chekupedzisira chedu chinyorwa chinyorwa. Pano, tichapfupikisa zvinhu zvakasiyana zvatakabata nazvo mumutsananguro, kuti tipe mupfupi uye mubatanidzwa zano reizvo isu takafumura. Dudziro yatinoita mumhedzisiro iyi ichave inoshanda sekunge ichitenderana nezvose zvakaburitswa mumashoko ekutaura. Mhedziso iyi, tinogona zvakare kuisa pfungwa yedu pachedu, kugutsikana kwedu nekuverenga, manzwiro aakatitumira, kuongororwa kwekushanda kwayo, nezvimwe.
Kugadzira tsananguro yakanaka pachinyorwa, kunyangwe kana tiine nhanho-nhanho yakadzama, zvakare zvinoenderana nekudzidzira, pane tsika yekuverenga yatinayo (kuverenga zvakanyanya kumashure kwedu, kwakakura mukana wekuwongorora uye zvinyorwa zvinyorwa isu ticha have), pakunetsa kwechinyorwa chavakatiisa pamberi pacho (hazvina kufanana kuongorora "Tsamba dzeMoroccan" yeCadalso kupfuura nhetembo yeGóngora), nezvimwe.
Naizvozvo, tinokukurudzira kubva Zvazvino Zvinyorwa, kwete kuzvivharira pamberi perudzi urwu rwemaekisesaizi, nekuti pamwe mune ramangwana uchave mupepeti kana muparidzi wekambani yakakosha yekutsikisa kana iwe unongofarira kuverenga nemabhuku zvakanyanya zvekuti unosarudza kuita bhuku rekunyora mauri isa mazana ekuongorora. Iyo zvinyorwa zvekuongorora iwo anotsanangura pamusoro pemabasa akazara. Asi isu tichataura nezve izvi mune imwe chinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Unogona here kunyora chinyorwa chakanaka?
Juan pennnnnnnnnnnniz akadaro
Ndiri kuverenga zvirevo zvemashoko akanyorwa!
Pindura Juan pennnnnnnnnnniz
Zvakanaka, ndakagamuchirwa kwazvo kana ndikasamisa rurimi rwangu pakupedzisira neizvi
Chinyorwa ichi chainakidza uye chaidzidzisa isu vaverengi, uye ndine chokwadi chizere kuti chichandibatsira kuti nditaure nenzira iri nani kubva zvino zvichienda mberi.
Icho chinyorwa chakanakisa chinoshanda segwara kana uchiita chirevo, sezvo ichitsanangura zvakadzama danho rega rega renhanho yekutevera mukuita.
APRIL MARIE MARTE BAEZ akadaro
Inonakidza kwazvo !!
Iwe unofanirwa kutarisa pamifungo yakaratidzwa muchinyorwa uye kwete pane anecdotes kana zano. Iwe unogona kusanganisira kuongororwa pamusoro pezvimwe zvinhu zvechinyorwa, senge mafungire emunyori kuchinyorwa: semuenzaniso, kana aine chinangwa kana achitsoropodza chokwadi kana nevanyori kana mhando yemutauro waanoshandisa.
Pindura kuna ABRIL MARIE MARTE BAEZ
Kubvumbi MART akadaro
Ndakaona ichifadza kwazvo !!
Pindura kuna APRIL MARTE
Mamwe maNobel Prize Vanokunda Vanyori Vanotorwa kuFirimu
Kosi ye "Copyright" iyo inogona kukufadza semunyori